Ubuntu, iyo Gnu / Linux kugoverwa kunodiwa nevashandisi kubatanidza | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu, iyo Gnu / Linux kugovera kunodiwa nevashandisi kubatanidza
Ubuntu kuparadzirwa kwakakurumbira, kwete chete pakati pevashandisi veLinux asiwo pakati pevashandisi veamwe masisitimu anoshanda avo vatoziva kugoverwa senge inoshanda sisitimu pachayo, chimwe chinhu chisina kunaka sezvo sisitimu yekushandisa iri Gnu / Linux.
Munguva pfupi yapfuura timu yeUbuntu yakagadzira infographic nezve vashandisi vanoshandisa Ubuntu kana Ubuntu Core yekubatana kwavo nemidziyo. Canonical uye Ubuntu vari kubheja zvakanyanya paInternet yezvinhu uye izvo zvakagadzira (kana kuti zvimwe zvinodzosera kumashure) izvo Ubuntu ndiyo yakanyanya kugoverwa pakati pezvakanaka zvishandiso kana webhu services.Iyo infographic ine akati wandei zvikamu zvine data. Vazhinji vavo vane ruzivo rwakanyanya senge huwandu hwevashandisi vanoshandisa Ubuntu kubatanidza, nhamba yakaenzana nehuwandu hwevaFiji, Estonia, Iceland, uye Isle of Man.
Huwandu hwewebhu masevhisi uye maSeva eInternet anoshanda neUbuntu ari kurovawo. Pakati peshumiro dzakakurumbira dzese dzadzo ndeyeNetflix, Spotify, Paypal, Ebay, Sky, Bloomberg, Tele2, AT&T kana Slack inozivikanwa.
Kugovaniswa kweCanonical kunowanikwa mune anozivikanwa uye ane simba gore masevhisi pasirese, ndiko kuti, Amazon Web Services, Google Cloud Injini uye Azure. Zvese zviri pasi peiyo kubernetes tekinoroji iyo yakaita kuti Ubuntu ishande nemazvo munzvimbo idzi.
Ubuntu iri inowirirana nehuwandu hwakawanda hweHardware mapuratifomu, chimwe chinhu chisiri chakasarudzika sezvo kwese kugoverwa kweGnu / Linux kuchipa rutsigiro rwakafanana. Dambudziko rinogara riine mugadziri uyo asingawanzo kupa ruzivo rwese rwunodiwa, asi chimwe chinhu chiri kuchinja uye pamwe nekutenda kuUbuntu iyo iri kusarudzwa nevazhinji vagadziri veayo Gnu / Linux mhinduro.
Iyo infographic inogona kutariswa kuburikidza Iyi link. Icho chinonyanya kufarira infographic, asi Ini ndinofunga chiri chinhu icho vazhinji vashandisi veGnu / Linux vaitoziva, kunyangwe isu tichizivawo kuti haisi yega Gnu / Linux kugovera iyo inopa zvivakwa kune vashandisi vayo Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu, iyo Gnu / Linux kugovera kunodiwa nevashandisi kubatanidza
Ini handichinje linux (debian) pasina. Ini ndaive nemawindows 10 uye ini ndakarega uye istale abuntu ndakafara. Ndinokutendai mose.
Isa iyo Telegraph desktop mutengi paLinux
Maitiro ekuwana nekuisa VirtualBox paLinux / GNU